CANAB "LIANA": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, TAYADA GAARKA AH, AAGGA ASALKA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA, SAWIR - BEERTA
Canab koraya waa wax xiiso leh oo xiiso leh oo la barbardhigi karo hal-abuurka dhabta ah, gaar ahaan marka ay timaado beerista, dhalashada iyo taranta noocyada cusub, dhadhanka iyo tayada asalka ah.
Dhawaan, lambarkoodu si joogto ah ayey u kordhayaan, sidaas darteed mid walba wuxuu dooran karaa isaga oo ah noocyada ugu habboon, oo ku xiran waayo-aragnimadiisa iyo doorbidiisa.
Isla mar ahaantaana, shuruudaha ugu caansan ee xulashada dhirta marka ay sii kordhayaan aagga dhexe ee dalkeenna waa caabbooda barafka iyo kuwa aan caqli-gal ahayn ee horumarinta cudurrada kala duwan.
Dhammaantood waxay si buuxda u dhigtaan "Liana", oo isku dhafan dhadhan fiican iyo aan qabyo-qab lahayn ee daryeelka.
Canab "Liana" ("Vierul", Moldova) Waxaa ku jira koox ka mid ah noocyada miisaska cad oo leh celceliska da'da.
Karmakod, Korinka Russkaya, Alexander iyo Pleven waxay sidoo kale ka mid yihiin noocyada miiska.
Waqtiga ay ka soo wareegto caleenta dalaggu goosashada waa qiyaastii 125-135 maalmood. Si buuxda u daadi by Sebtembar 10-15.
Waa ku haboon tahay isticmaalka cusub, iyo sidoo kale soo saarista casiirka iyo khamriga..
Amethyst, Crystal iyo Athos sidoo kale waa la wada baabbi'iyey cusub.
Hardy iyo adag tahay. Uma baahna hoyga xilliga jiilaalka, oo ku xiran baraf ku filan.
Isla mar ahaantaana, xitaa xilliyada qaboobaha aad u qabow, ilaa 57% bartamaha iyo 76% ee burooyinkooda badalida waxay ku sii jiri doonaan geedka. Natiijada ugu fiican ee koritaanka iyo wax soo saarka ayaa lagu muujiyey carrada iftiinka iyo nooca dhilaca.
Waxaa si fiican u dulqaadan by dhaxan iyo noocyo noocan oo kale sida Beauty of North, Super dheeraad ah iyo Arched.
Ka taxadar: Markaad kobcinayso noocyada kala duwan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo culeyska 40-50 indho kasta oo baadiyaha ah. Gooyo waa in la sameeyaa 6-9 indhood.
Grape Lyan: sharaxaada noocyada kala duwan
Cabbirka xargaha ee "Liana" - celceliska.
Waxay qabaan qaab ah qadar yar ama qaab yar leh, oo leh miro dhexdhexaad ah oo waaweyn (qiyaastii 3.8 g, xaddiga: 2.5 x 1.8 cm). Celceliska farqiga culeyska waa 300 illaa 400 g, cabirka: 16 x 12 cm.
Midabka miraha: Cagaar iftiin leh hoon dahab ah, mararka qaarkoodna leh "tan". Berry waa fareem, oo leh casiirnimo wanaagsan iyo maqaar khafiif ah. Tirada abuurku waa mid aad u yar (inta badan ma aha mid ka badan hal). Dhadhanka ayaa isku dheelitiran oo la isku dheelitiran iyo caraf udgoon oo laga sameeyey, oo ah xusuusta caanaha Moldovan caan ah "Chaush".
Muscat Novoshakhtinsky, Anthony The Great iyo Anyuta ayaa sidoo kale ku farxi doona dhadhanka muscat.
Xididada - dhexdhexaad ah, leh caleemo wareegsan leh shan lakab, leh dhexdhexaadin dhexdhexaad ah ama xoog leh. Laga soo bilaabo kor ku xusan - midabka cagaaran, midab cagaaran Hooska hoose ee dhinaca hoose ayaa maqan.
Caleemaha dhalinyarada ee taajka, iyo astaamaha caleemaha yar yar yihiin midabka midab leh. Qeybta xaashida waa xayawaanka saddexaglaha ah ee qaab-sawir leh. Koritaanka duurka waa mid dhakhso ah. Tayada geedka canabka ah waa wanaagsan yahay. Nooca ubaxa waa hermaphroditic (bisexual).
Romeo, Helios iyo Charlie waxay kaloo leeyihiin ubax bisexual ah.
Macluumaadka waxtarka leh: In kasta oo xaqiiqda ah in "Liana" waa mid ka mid ah noocyada leh dareenka abaarta sare, marka maqnaan la'aanta qoyaan ku filan wakhti dheer, noocyada noocan ah ayaa laga saari karaa peduncles iyo inflorescences oo dhan, taas oo horseedaysa hoos u dhac ku yimid dhalidiisa.
Canab Sawir "Ljana":
Asalka iyo Aaladda Dabka
Waxyaabaha waalid ahaan si loo helo canab "Ljana" ayaa la isticmaalay noocyo "Chaush white" iyo "Pierrel". Degmadu waa - Republic of Moldovalaga bilaabo halkii loo keenay Ruushka sannadkii 1980 (gobolka gobolka Pridonya), iyada oo loo marayo xannaanada carruurta lagu hayo xanaanada ee Tsyurupinsk.
Waa iskudhaf dhexaad ah oo ka mid ah nooca adag ee ujeedada guud, oo lagu saleeyay noocyada yurub iyo maraykanka. Noocyada kala soocidda ayaa soo saaray DD. Verderevsky, K.A. Voitovich, I.N. Naydenova.
Universal waa Muscat Hamburg, Kishmish Jupiter iyo Lydia.
Astaamaha iyo tayada gaarka ah
Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee canab "Ljana" waa dhalidda sareQeybta celceliska waa qiyaastii 6 kg halkii baadiyaha ama 120 ilaa 160 sicirba hektar.
Abaalmarinta Magarach, sannad-guurada Kherson Summer Resident iyo Rkatsitic ayaa sidoo kale ku farxi doona goosashada sare.
Tirada burushyada berry on cayayaanka horumariyey - 1.3 pcs., On midho leh - 1.5 pcs. Iskudheellitirka dhirta - 1.6, baridho - 1.7.
Maaddada sonkorta ee "Lena" miraha waa mid aad u sareysa. Waxyaabaha sonkorta casiirka ah ee noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee noocaan ah waa 14-18% oo leh kiimiko ah 6.5 ilaa 6.7 g / l.
Waxaa loo isticmaalaa foomka cusub iyo tan qasacadaysan. Marka la eego tayada dhadhanka, canabka waxaa lagu qiyaasay 8.2 dhibcood.
Ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee noocan oo kale ah waxaa loo aaneyn karaa abaarta, caabinta barafowga, gaadiidka u fiican iyo soo bandhigid wanaagsan..
Uma baahnid hoy for jiilaalka iyo isticmaalka kiimikooyinka gaarka ah ee ilaalinta iyo ka hortagga. Cilad-darrada cudurada iyo cayayaanka. Waa hagaagsan yihiin noocyada rootstock.
Resistance to cudurada sidoo kale waa kala duwan Delight White, Augustine iyo Krasin.
Beeralay badan oo badan oo jecel kuwa kobciya noocyada kala duwan ee "Liana" ee sirta shaqsi ahaaneed waxay qeexayaan "dhibaato la'aan" iyo "si sahlan loo daryeelo." Gaar ahaan, wuxuu u qalmey qiimeyntan oo kale sababtoo ah difaaciisa cuduro badan iyo cayayaanka dhaqankan.
Kuwaas waxaa ka mid ah caarada, kalluunka casaanka, oidiyum, iyo sidoo kale caarada caarada, phylloxera, iwm. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha kala duwan ee xaaladaha, noocyada noocaas ah waxay leedahay halis aad u sareysa oo ah kansarka bakteeriyada.
Magacaas waxaa badanaa loo yaqaan kobaca nooca kansarka ah ee ka samaysan gacmaha iyo shtambe ee canab (inta badan ka dib markii xoogaa adag oo dheeraaday ama daba dheeraaday).
Wakiilka keena cudurku waa bakteeriya nooca Pseudomonas tumefaciens Sm. et Towns. - Agrobaoterium tumefaciens [Sm. et Towns.] Conn., taasoo keentay dhaawac burburay oo xididdada iyo qeybaha kale ee dhirta miraha.
Noocida cudurkan loo yaqaan 'pathogenic organisms' wuxuu ku yimaadaa duurka udugga iyada oo loo marayo nabarrada iyo qaboojiyaha. Halkaas ayay ku kordhisaa, sababtaa isbedelka unugyada iyo burburinta, geeddi-socodkuna wuxuu sii wadi karaa wakhti dheer.
Ka dib markii ay kala go'do, bakteeriyada ka soo jeeda muraayadaha u eg sida burka ayaa geli kara ciidda, halkaasoo laga heli karo sanado.
Si loo ilaaliyo canabkiisa cudurkan khatarta ah, waxaa muhiim ah in laga hortago biyaha joogtada ah ee xididdadiisa iyo si looga ilaaliyo dhaxan daran.
Tallaabooyinka xakamaynta: Ka saarista koritaanka caleemaha leh jeermiska qasabka ah ee jarista jaranjarada leh beerta beerta. Haddii habkani aanu ku caawin, waxaa ugu wanaagsan in si buuxda looga saaro duurka iyo bilaabaan sii kordhaya canab ah bilowgii.
Guud ahaan, "Liana" waxay leedahay iska caabin aad u sareeya ee ku dhowaad dhammaan cudurada canab., oo ay ku jiraan anthracnose, bacteriosis, chlorosis iyo rubella, iyo sidoo kale cayayaanka ugu muhiimsan, oo ay ku jiraan caleen.
Sidaa darteed, canab "Liana", sababtoo ah farsamooyinka iyo farsamooyinka beeraha sahlan, waxay ku habboon yihiin beerta iyo xardheysatada leh khibrad yar. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa:
Ka horjeeda barafowga sare;
Soo saar wanaagsan iyo muuqaal muuqaal leh;
Cudurrada cudurada iyo cayayaanka;
Si fudud loo daryeelo oo loo beero.
Tilmaamahani wuxuu suurtogal u yahay in uu kobciyo noocyada kala duwan ee gobollada kala duwan ee dalka, oo ay ka mid yihiin meelaha heerkulkoodu ka hooseeyo celceliska heerkulka iyo helitaanka wax-soo-saarka xasilloon xitaa sanadaha cimilada aan fiicnayn.